Lenovo dia nanambara ny finday avo lenta ho an'ny Project Tango 500 $ | Androidsis
Lenovo dia ao anatin'ny andro iray tena mahaliana miaraka amin'ny vaovao sasantsasany toy ilay mpandika ny vaovao izay hampiditra Lenovo ao anatin'ny tabilao fandaminany orinasa ka amin'ity taona ity ny Moto X sy Moto G manaraka dia hanana ny logo «Moto by Lenovo» ao aoriana. Fomba manokana hidirana amin'ny tsenan'ny telefaona finday, izay tsy naharatsy izany andian-dahatsoratra Vibe izany, saingy tena nila ny famporisihan'ny Motorola hampahafantatra tsara kokoa an'io vahoaka io izay mahalala azy kokoa amin'ny solosainy fa tsy amin'ny findainy. Ahoana no mbola itoerany ao amin'ny CES any Las Vegas, ankehitriny dia nanolotra vokatra somary manavao avy amin'ny tanan'ny Google lehibe.
Lenovo dia nanambara ny fomba niarahany niasa tamin'ny Google sy Qualcomm nandritra ny herintaona mahery mamorona fandraisana andraikitra manokana ao amin'ny Project Tango. Powered by processeur Qualcomm Snapdragon tsy fantatra, hivoaka mandritra ny fahavaratra manaraka ity fitaovana tsy fantatra anarana ity. Ny daty fandefasana dia hiankina amin'ny fizotran'ny fampandrosoana sy ny famolavolana izay asitrika ao anaty ny Lenovo ankehitriny ary hahafahantsika mahita fitaovana iray izay tsy hihoatra ny 6,5 santimetatra, izay raha ny fahitana azy, no ho refy habe ho an'ireo finday finday Tango ireto.
1 Lenovo sy finday avo lenta Tango
2 Apps Tango
Lenovo sy finday avo lenta Tango
Lenovo dia hamokatra finday avo lenta an'ny Project Tango vonona ho an'ny mpanjifa farany araka ny nohamafisin'i Jeff Meredith, filoha lefitra Lenovo, ary Johnny Lee, mpitarika ny tetikasa. Project Tango dia manambatra fakantsary, gyroscope, ary accelerometer hamoronana teknolojia fampitomboana ny zava-misy 3D. Nanambara i Lee fa ny fahatsapana ny habaka sy ny fivezivezena avy any Tango dia hampidirina anaty finday izao. Azonao atao ny mampiasa efitrano iray hilalao lalao video sy hanafenana ao ambadiky ny fanaka iray. Araka ny filazan'i Lee tenany ihany, ny Project Tango dia mamorona "varavarankely majika."
Mba hanehoana izany dia nampiasa ny fitaovana Tango i Lee ampiasao ny sensor-nao handrefesana tsara ny hahavony rindrina ao anatin'ny habakabaka nitrangan'ilay hetsika tao amin'ny trano fisakafoanana Aquaknox any Las Vegas. Ny teknolojia fananan'i Project Tango dia ahafahan'ny mpampiasa mandrefy efitrano amin'ny 3D, hahafantatra ireo toerana nisy ny telefaona teo aloha, ary hifanindry ireo sosona virtoaly amin'ny zava-misy nampitomboina izay hita eo amin'ny efijery.
Ny teny nalaina dia nampiasaina ihany koa ho an'ny Google sy Lenovo manasa ireo mpamorona hanolotra hevitra ho an'ny lalao video sy ny fampiharana miorina amin'ny teknolojia scanner 3D. Ny orinasa dia hisafidy ireo ankafiziny ireo ary hanome ny famatsiam-bola sy ny fanohanana ilaina ho lasa tena zava-misy. Ireo fampiharana efa vita ireo dia hapetraka amin'ny finday avo lenta an'ny Lenovo-Google ho an'ny zava-misy azo ampitomboina izay hisy dikany hafa amin'ny alàlan'ity fitaovana vaovao ity.
Handray anjara amin'ireto hevitra ireto ho an'ny fampiharana tokony hampiasainao Ity rohy ity hahatratra an'i Google sy Lenovo alohan'ny 15 Febroary, izay rehefa tapitra ny fandraisana. Efa tamin'ny taon-dasa raha nandefa fifaninanana sahala amin'izany i Google ary nandresy ankamantatra 3D.
Ilay fitaovana, izay hahitantsika a isan'ny sensor tsara hamaritana izany habaka izany amin'ny 3D izay manodidina antsika handefa zava-misy marobe, tsy hihoatra ny vidin'ny 500 dolara izany. Hosantarina manerantany ary izy io dia ho iray amin'ireo hetsika mahavariana indrindra amin'ity taona vao navotsotra ity. Raha manana safidy hiditra amin'ny Famandrihana Oculus Rift Mba hahatratra ny tranontsika tsy ho ela miaraka amin'ity zava-misy virtoaly ity izay manokatra ny faravodilanitra amin'ny tontolo hafa ivelan'ity ary izay hisitrika ireo mpampiasa rehetra, ny zava-misy nampitomboina dia handray dingana lehibe rehefa eo an-tsena ny hetsika Lenovo ary ampiarahina amin'ireo Intel's. manana 400 $ latsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Ny smartphone Google sy Lenovo an'ny Project Tango voalohany miaraka amin'ny scanner 3D dia latsaky ny 500 $
Ny varotra HTC dia nilatsaka 35% tamin'ny 2015